200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Dalka Baxreyn oo dalbaday in Qadar laga saaro Golaha iskaashiga Khaliijka | Shabakada Warbaahinta Times
Dalka Baxreyn oo dalbaday in Qadar laga saaro Golaha iskaashiga Khaliijka
Oct 30, 2017 - jawaab
Manama (Caasimadda Online) – Iyadoo ay meel xun mareyso xiriirka dowladaha Khaliijka iyo dalka Qatar Dowladda Baxreyn ayaa dalbatay in dalka Qadar laga saaro xubinnimida Ururka Iskaashiga Khaliijka Carabta ee GCC loo soo gaabiyo.
Khaalid bin Axmed Al-Khaliifa oo ah Wasiirka arrimaha dibadda Dalka Baxreyn Khaalid bin Axmed Al-Khaliifa ayaa Twitterkiisa ku sheegay in Dowladda Baxreyn aysan ka qeyb geleyn shirka Golaha iskaashiga Khaliijka Carabta ee ka dhacaya Magaalada Qaahira ee Caasimadda Dalka Masar.
Khaalid ayaa sheegaya in Qadar haddii aysan is ka beddelin mowqifkeeda hadda aysan Baxreyn ka qeybqaadan doonin shirka Golaha ee ka dhacaya Qaahira.
Wasiirka ayaa sidoo kale ku baaqay in Golaha Iskaashiga Khaliijka Carabta ay xubinnimada kala laabtaan Qadar,haddii kalena aysan Baxreyn tageyn shirka soo socda.
Waddamada Sucuudiga,Imaaraadka,Baxreyn iyo Masar ayaa 5tii June xiriirka u jaray Dalka Qadar kaddib markii ay ku eedeeyeen in ay taageerto Argagixisada,sidoo kalena xiriir dhow la leedahay Dalka Iraan.
Xiisadda Dowladaha Khaliijka ayaa cirka isku sii shareerayo, waxayna dowladaha ku kacsan Qatar doonayaan inay dowladaha adduunka ka helaan olole ka dhan ah dalkaas si loo saaro cuna qabateyn dhinac walba ah.
Dowladda Qatar ilaa hadda arrintaan wax jawaab ah kama bixin, waxaana muuqato in dowladaha kale ee go’doominta saaray ay iyagana ku qanacsan yihiin.